Ampidino Twitch ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (118.71 MB)
Twitch dia azo faritana ho toy ny fampiharana birao Twitch ofisialy izay mikendry ny hampivondrona ireo renirano sy namana ary lalao Twitch tianao indrindra.
Ny Twitch Desktop Application, izay rindrambaiko azonao sintonina sy ampiasainao maimaimpoana aminny solo-sainanao, dia fitaovana ilaina raha te hijery Twitch aminny sehatrasa manokana ianao fa tsy ny Internet-nao. Ny Twitch Desktop App dia manambatra ireo fiasa rehetra ao aminny tranokalani Twitch sy ny maro hafa.
Azonao atao ny mijery ny fandaharana Twitch tianao indrindra aminny alàlanny Twitch Desktop Application, mahita fantsona vaovao ary misoratra anarana aminireo fantsona ireo. Azonao atao koa ny manohana ny mpitory aminny Bits sy Cheering. Ny Twitch Desktop App dia miasa ho fitaovana fandefasana hafatra, fifampiresahana feo ary fifampiresahana horonan-tsary. Afaka mampiasa ny rindrambaiko ho solonny fitaovana toa ny SKype na Discord. Afaka manana fifampiresahana am-peo na fihaonambe an-tsary aminny lalao ianao.
Aminny fampiasana ny Twitch Desktop App, azonao atao ny manatevin-daharana ireo vondrom-piarahamonina mikoriana sy milalao ary miresaka momba ny riaka na dia tsy mavitrika aza ny riaka. Azonao atao ny miditra, misintona ary mametraka add-on izay novolavolaina ho anny lalao aminny alàlanny Twitch Desktop Application.
Servers: Trano virtoaly iray ho anny fiarahamoninao hiresahana, hijerena ary hilalaovana aminny efitrano fandraisam-peo sy efitrano fandraisam-peo tanteraka. Ampifandraiso aminny mpizara anao ny fantsonao Twitch hahafahanny fiarahamoninao mijery mivantana sy mampiasa Twitch Chat ao aminilay fampiharana.
Messaging: Friend Sync dia manafatra haingana ny namanao sy ny lalao manaraka anao. Noho izany dia afaka mandany saka ianao ary mandany fotoana bebe kokoa aminny firesahana, fandefasana hafatra an-tsarimihetsika ary fiaraha-milalao kely kokoa.
Audio: antso an-tariby kristaly eo anelanelanny namana iray na roa na vondrona iray feno fanafihana. Manomboha resaka aminny olona rehetra aminny alàlanny fandefasana rohy fanasana eo noho eo aminny chat. Na mihaona mifanatrika aminny namanao akaiky indrindra sy malalanao, ny tsipika ambany ary ny mpiara-miasa aminao aminny alàlanny antso an-tsary. Olona hatraminny dimy no afaka miresaka aminny HD tsara tarehy. Rivotra koa ny fizarana efijery.
Addendum: Mitadiava, mametraka ary tantano ny add-on ho anny fampiharana tianao indrindra ao anatinny fampiharana. Ny fitehirizanny rahona tsy ho ela dia manamora ny fivezivezena ny fikiranao aminny milina maro. Azonao atao ihany koa ny mamela ny takelaka anaty lalao hitantanana ny antso am-peo sy horonan-tsarinao nefa tsy asiana tab-alt.
Haben'ny rakitra: 118.71 MB